Europe Travel muna April zvinoreva Europe Travel Munguva The Spring Time! Sezvo vazhinji veEurope vari kure kwazvo kubva kuequator, vakawanda wakakurumbira maguta vachiri vachitova chilli muna April (Rongedzai maererano). Still, Europe Travel muna April anogona kuva mumwe zvakanakisisa mwedzi kwegore kushanyira Neine Basa Chaizvo uye vakawanda dzakakurumbira maguta pano. kutonhora vari inodziya kukwana anakidze dzinoyevedza, asi chaunga hukuru iduku zvikuru pane uchaona kutangira muna May uye June. Heino yedu runyorwa nzvimbo dzekushanyira pakufamba kwako kweEurope munguva yechirimo!
Mufananidzo uyu akaiswa Europe Travel Munguva The Spring, mufananidzo rugare Lakeside mumisha uye mvura yakadzika yebhuruu wokumubatsira mezvikomo ari Alps, apo chando-dzavhara nenhongonya vanoumba zvinoshamisa colour kuna enchanting Borromeo Islands; beguiling Como, apo makomo kusvetukira mukati munzvimbo yakadzika uye wakajeka mumisha kuomerera mawere. Izvi siyana zvatinoona ndiwo mutsa kukukurudzira kunyora nhetembo kana nomuzvarirwo peta kuva pasi imbwa nechinzvimbo. Rinongova saka zvinoshamisa runyararo!
Shanyira nharaunda iri April, Chitubu sechikamu che Insight Guides Enchanting Italian Lakes rwendo kugara pamberi pemhomho.
Vanopemberera kutanga Spring uye kubata chitima kuna Barcelona. hazvizovi kutora zvakawanda kuwira murudo guta rino Spanish pamwe Spanish vanhu, uyo nguva dzose yeuka kuti kufaranuka uye atore daily pokuzorora – kurara nekukurumidza mushure mekudya kwemasikati, apo vakazorora nomusi chena mahombekombe, kudya zvinonaka paella, uye kunwa yakachena sangria.
Kunyepa munharaunda Catalonia, akananga kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kweMediterranean mhenderekedzo yeSpain, Barcelona ndiro guta rechipiri pakukura mu Speini, uye mumwe kupfuura nomukurumbira dzokugara nokuti vafambi kuna Europe Travel Munguva The Spring. Barcelona ndiye inonakidza Crossover kubva mapurani kusimba ekare anokosha uye ano magadzirirwo. Kana uri kukuchidzira huru Gaudi mapurani, uyai pano kuona huchikwezva Sagrada Família, Casa batllo, uye Güell Park. Barcelona Kazhinji ushamwari gore rose, uye iwe unogona kushanyira ichi mushanyi noushamwari guta chero nguva yegore.
Muzive kuti Bruges, Bherujiyamu, Rinotaurwa “broozh,” asi vazhinji, uye magamba “In Bruges” firimu, zvirokwazvo regai. Ivo vanhu vekuDublin vanorova, akatuma ikoko webasa ravo kwevhiki mbiri pashure nokurova anoenda zvakaipa chaizvo. Mumwe munhu wechiduku hothead anoona pasina chikonzero kuti chero asi Dublin; chimwe chacho, vakura, gentler, zvikuru kuziva, anotenga bhuku rinotungamirira uye inozivisa: “Bruges ndiyo yakanakisisa-akachengetedzwa guta Ages kuBelgium!”
Saka zvechokwadi kunoita. Kana firimu chandamboita zvimwe, yakafuridzira vazhinji chishuwo chekukurumidzira kushanyira Bruges.
kushandiswa ndeye maviri-kune-mumwe akakosha gore rese! Kunyepa pakati France uye Spain, iro guta diki rinozivikanwa neiyo simba rokuchinja maguta maviri auye, kuchiguma wakashata doro uye chokoreti. Pamwe na Paris, Prague, uye Budapest, uyu ndiye mumwe kupfuura da maguta Europe azere canal Ages dzimba makumi.
ichi 2,000 gore guta rekare iri kumadokero Jerimani uye nemagariro nomusimboti mukuru nharaunda yacho. With Ages machechi uye mukare rwizi maonero, Cologne ane ruchiva-vakakodzera rwendo. Kunyanya avo vanoda kusvetukira tsika itsva uye ruzivo nzira itsva upenyu apo vaifamba mu Europe. Usakanganwa kamera yako! Cologne ndiro guta sedzisingasaruri. Zvichida haina kunaka pakutanga kutarisa semamwe maguta, asi kana uchifamba famba, uchaona kuti rimwe nicest maguta muGermany uye zvechokwadi pane yatakanyora pasi kuti Europe Travel Munguva The Spring.
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye chete tipei kadhi rine kubatana iyi Blog romukova, kana iwe tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feurope-travel-during-spring%2F%3Flang%3Dsn - (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)